Lehiben’ny faritra Boeny: sady tia mianatra no tia mampianatra | Région Boeny
Lehiben’ny faritra Boeny: sady tia mianatra no tia mampianatra
24 avril 2017 A La Une, Actualité
“Misy foana ny fianarana, ka mandra-piantson’Andriamanitra anao, dia mianàra hatrany fa mampivoatra izany…” Io no hafatra mifono anatra nomen’ny Lehiben’ny faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar ireo Mpianatra avy ao amin’ny IPAM (Institut privé Al Moustapha) Analamahitsy Antananarivo.
Taona faharoa amin’ny Fitantanana sy Lalàna miisa eo amin’ny 40 izy ireo, manatanteraka “voyage d’études “eto Mahajanga mandritra ny herinandro. Nanazava sy nampianatra azy ireo mikasika an’i Boeny ny Lehiben’ny faritra ny Alakamisy 20 avrily 2017 tao amin’ny efitrano fivorian’ny Bloc administratif Ampisikina Mahajanga.
Nohazavainy tamin’izy ireo ny fiandohana ara-panjakan’ny faritra amin’ny maha Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana azy, ny andraikiny manoloana ny Prefektiora, ny tantaran’i Boeny. Nampahafantariny ihany koa ny monographie tsotsotra izay niresahany ny toekarena, ny tontolo iainana, ny fizahantany ary ny fandriampahalemana, sy ireo olana misy eto amin’ny faritra.
Anisany zava-baovao tena mbola tsy fahitan’ireo mpianatra ireo ary nahaliana azy, ny fananan’ny Faritra ireo boky-fitaovana na documents outils toy ny Dinan’i Boeny Miray Dia sy ny Drafi-paritra fanajariana ny tany na SRAT (Schéma régional d’amenagement du territoire).
Naharitra ora roa ny famelabelarana nataon’ny Lehiben’ny faritra, kanefa tsapa ho tena liana tokoa, na ireo mpanabe nitondra na ireo mpianatra, tamin’ny alàlan’ireo fanontaniana sesilany napetrak’izy ireo.